Ukulinda iPad 2 - Geofumadas
Kuhlekisayo, kodwa inxalenye efanelekileyo yabasebenzisi beeplatifthi zeselula zilindele oko kuza kuboniswa kwiiyure ezimbalwa.
Ngendlela yokubeka i-Apple kwiifowuni, kufuneka sibone oko kwenzekayo:
Ngaba uTom Cook uyazi indlela yokwenza umdlalo ofanayo kunye nempembelelo efanayo noMsebenzi kunyaka ophelileyo?
Ngaba iya kuphumelela ukugxeka emva kokusabalalisa i-16 yezigidi ngonyaka omnye nje?
Ngaba iya kuzisa iikhamera ezimbini ezilahlekileyo ezininzi?
Ngaba i-Apple iyaqhubekeka kwingcamango yokutshintsha iindibano ekudlulisweni kwedatha?
Ngaba kuya kubakho ulinde ixesha elide le-IOS 4.2?
Ngaba iya kushukumisela abasebenzisi banamhlanje ukuba basuse loo nto banayo?
I-White, ngee curve ezimbalwa, isisombululo esiphezulu, blah, blah, blah?
Enye into eqinisekileyo, ukuthengiswa kuya kuhamba, kungekhona ngenxa yento entsha, kodwa ngenxa yokuba abaninzi baye bathetha isigqibo kwi-Ipad balindele ukuba i-2 ingene. Ininzi yokugxekwa kwintlanzi ye-rosette yayikufuna ukuwufanisa kunye nefowuni, i-laptop okanye i-PC.
Kwiinyanga ezimbalwa zokuzisebenzisa, ndiza kucinga ukuba kungakhathaliseki ukuba zininzi zintsebenziswano, kuya kuba nzima ukuba bafezekise kwimisebenzi entsha kunye nokuzinza. Indlela yokuhlaziya inkqubo yakho yokusebenza kunye nezicelo ngenye yamandla amakhulu kaMac.
Ixesha eliza kuboniswa liphakathi kwemini yeziko le-United States, elilingana ne:
I-6: I-00 PM eLondon
I-5: I-00 PM eMadrid
12: 00 M eMexico
I-1: I-00 PM ePeru
I-4: I-00 PM e-Montevideo
Ezi nkcukacha-manani lwenyanga yokugqibela egeomates zendlela zisekuhleni: I-iPad liyindlela mobile ngawo ifikelela phantse isiqingatha zabasebenzisi, ukuba wongeze ezinye izinto zokudlala yimpumelelo ezintathu Apple ezixhasa Internet, sinokubona ngokucacileyo ukuba bafikelele 77%.
Ewe, xa uhlaziya i-desktop navigation kwaye uyongeza, uhamba nje nge-3%. Nangona ibonisa ukuba iWindows iyakwi-monopoly, kwikamva elisondeleyo i-Apple iza kukwazi ukuzibeka ngokubhetele kangcono njengoko ukuhamba kweemoto kuhamba.
Iziphumo eziboniswe zivela kwiimakethe zithetha iSpanishi, kwezinye iindawo zokubeka isikhundla se-Apple mkhulu kuba ukufikelela kweselula kuphezulu. Kwakhona kwinqanaba elingaphantsi kwetafile yi-Nokia, ephakathi kweMpuma-mpuma kunye neYurophu inamandla; I-BlackBerry ibonakala kuphela e-United States, eCanada nase-United Kingdom.
Ngokombono wam, ngomso, kwimidiya yedijithali, i-ipad 2 izakuziva ixinzekile.
Iigekethi Abasebenzisi be-iphone bayakugxeka kwakhona into engekho ithebhulethi
Abaphuhlisi beeSofthiwe baya kuphupha malunga nezinto ezikhoyo ngoku.
Abaqapheleyo baya kulinda izimvo zabanye ukuba baphonse imali yabo kungekudala.
Abo bangagqibekanga, baya kubandakanywa kwi-craiglist.
Kwaye abathengi abanyanzelekileyo baya kuthungela ikhadi labo lekhredithi ngokudlala itekisi engekafiki esitolo.
Ndiya kuthetha ngokubuyisela iPad 2.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ikhosi ye-gvSIG yamahhala
Post Next I-2 Ipad, Ukususela kumbono wethuOkulandelayo "